Duqeymo lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal kale oo Shabaab ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Duqeymo lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal kale oo Shabaab ah oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya
By Liibaan Nuur	 On May 25, 2020
Waxaa faah faahino laga helayaa duqeymo ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada Bay, Shabeellada Hoose iyo degmada Jamaame gobolka Jubbada Hoose.
Deegaanka Kuunya_Barow ee gobolka Shabeellada Hoose duqeynta koowaad ay ka dhacday ayaa waxa la sheegay in bartilmaameedku ahaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, gaar ahaan ku wooda ka howlgala gobollada Shabeelooyinka, kaas oo saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ay magaciisa ku sheegeen Abuu Mucaad.
Sidoo kale sarkaalkaas waxaa lala dilay sida la dheegay dagaalamayaal kale oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo dhow iyo toban kor u dhaafaya sida ay noo sheegeen saraakiishu.
Degaanka Buula-fulaay oo ka tirsan gobolka Bay ayaa isla xalay la duqeeyay, waxaana la sheegay in halkaas lagu dilay saraakiil Shabaabka deeganka jooga tababaro siin jirtay, kuwaas oo kor u dhaafaya ilaa todoba nin sida ay noo xaqiijiyeen saraakiishan noo warantay.
Sidoo kale degamada Jamaame ee Jubbada Hoose ayaa lagusoo waramayaa in duqeyn kale ay ka dhacday, taas oo lala bartilmaameedsaday xero ciidan oo ay deganaayeen Al-Shabaab-ka maamulka Jamaame.
Saraakiisha ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ee xogtaan soo gudbiyey ayaa sheegay in Jamaame Al-Shabaab loogu geystay khasaarihii ugu badnaa, iyadoo gabi ahaanba la burburiyey xeradii la weeraray.
Sidoo kale waxa ay sheegeen in qiyaastii in ka badan boqol dagaalame oo Al-Shabaab ah uu weerarkaas ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac, sidoo kale dadka ku nool qaar ka mid ah deegaanada la duqeeyay ayaa noo xaqiijiyay duqeymahan, in kastoo ay ka gaabsadeen inay wax ka sheegaan khasaaraha jira, dhankooda Al-Shabaab ayaan weli ka hadlin.